News 18 Nepal || परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् दिमागलाई तेज बनाउने उपाय
एजेन्सी । जब विद्यार्थीहरुको परीक्षा नजिक आउँछ, उनीहरुको दिमागमा एउटा डर पैदा हुन्छ कि उनीहरू कसरी यति धेरै कुराहरु सम्झन सक्छन् । यसको लागि बच्चाहरू रातभर जागेर भएपनि पुस्तकहरू पढ्छन् र उनीहरूको दिमागलाई तिखार्ने हर सम्भव प्रयासहरु गर्दछन्, ताकि तिनीहरूले लाभ उठाउन सकून् ।
अनुहारमा कसरी ल्याउने प्राकृतिक चमक ?
यी ५ राशीका व्यक्ति, जसले बदल्छन् आफ्नो भाग्य आफै
घरमा नराख्नुहोस् यस्ता वस्तु, हुनेछ धन हानीका साथै अनिष्ठ